Resaky ny mpitsimpona akotry : ny tafika sy ny adidiny | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : ny tafika sy ny adidiny
Tandroka aron’ny vozona ny tafika araky ny filaza azy, anton’ny fitaizana azy na vesatra ho an’ny firenena aza ny fikarakarana sy famatsina ny fisin’ny foloalin-dahy. Fiarovana ny fanjakana sy ny vahoaka no adidiny. Fiarovana eo amin’ny laonin’izay mety ho fahavalo mety anambana ny fiadanam-pirenena. 50 taona mahery izay no nijorony ary tsy nasiana fahavalo avy any ivelany nandrangaranga teto amin’
ny tanindrazana. Arahaba soa arahaba tsara, misaotra anareo ry zalahy miaramila. Ny fahavalo avy any ivelany no tsy nisy nananika nefa kosa na izany aza dia mihanaka toy ny menaka ny fahavalo roa eto anivon’ny tany sy fanjakana, I Rafahantrana sy ingahy Tsifandriampahalemana. Azo lazaina fa tsy hari-pitaovana no tsy tompon’adidy I Ramiaramila eo amin’ny ady fanoherana ny fahantrana, raha ny ady fandravaravana ny asan-dahalo sy ny an’ireo mpanao ratsy samihafa mety ho kapaokan’ny tafika. Ny fanomezana anjara azy
amin’izany adidy izany , sady mety ahavelom-bolo an’ireo miaramila izay tsy manana iraka mivantana afa-tsy tontolon’ny taona ny fitaizan-tena sy fanazarana hiatrika fahavalo tsy misy, arakarik’izay sedra tsy nodiavina izay no mety ho tsy fahampina traikefa sanatria raha tonga tokoa ny tokoa, na izany aza aleo ihany miomana arak’izay azo atao.
Eo ankilan’izay tsapa ary mandrahona eo amin’ny ho avin’ny tanora ny tsy fahampin’ny asa. Malaza manam-pahaizana ny ao amin’ny tafika momban’ny fikajina sampan-draharaha maro, inona moa no manakana ny fanomezana andraikitra azy mikasika ny fampitana an’izany fahaizana izany eo amin’ny tanora. Ampahafirin’ny vola lany eo amin’
ny sampana samy hafa fehezin’ny fanjakana ity ka ampitombona ny isan’ny miaramila. Nohon’ny fabetsahan’ny tanora sarotra angamba ny fanerena ny rehetra anatanteraka ho adidy ny fanefana herintaona fanompon-tanindrazana eo anivon’ny tafika na zandarmaria. Fantatra koa moa fa ireo sampana roa ireo nohon’ny famolavolana amin’ny fanajana ny fitsipika misy mitondra miakatra ny toe-tsain’ireo miaramila miray dia aminy. Angamba samy hiaiky ny rehetra fa ilaina ny fisondrotana toy io raha iandrandra amin’izany fampandrosona izay mbola manao andraso andraso mandrak’ity ny androany.